काठमाडौं, फागुन २० गते । अर्थमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभएको छ ।
उहाँको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद भोलिबाट समाप्त हुने भएकाले आजैबाट राजिनामा दिनु भएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनु भएको मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हाल्नु हुने उल्लेख छ ।
१९ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबाट राजिनामा गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा बुझाएका हुन् । त्यसअगाडि उनी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बिदाई कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । मन्त्रालयका एक उच्च …
युवराज खतिवडाले लिए मन्त्री पदमा फेरि शपथ, दोस्रो कार्यकाल सुरु, को को भए सपथमा सहभागी?
अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि मंगलबार मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो ।
खतिवडाले दिए राजीनामा, अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयकाे जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित खतिवडाले
अर्थमन्त्रीलाई सञ्चार मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी उनले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई दिइएको छ।
बाँस्कोटाले सम्हालेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी खतिवडा र नेम्वाङलाई
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा युवराज